काठमाडौँमा थप दुई जनामा हैँजाको संक्रमण, सचेत हुन विज्ञको सुझाव « Canada Nepal
काठमाडौँमा थप दुई जनामा हैँजाको संक्रमण, सचेत हुन विज्ञको सुझाव
काठमाडौँ–काठमाडौँमा थप दुईजनामा हैँजाको संक्रमण देखिएको छ ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकुका सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनकाअनुसार यससँगै हालसम्म काठमाडौँमा ४ जनामा हैजा पुष्टि भएको छ ।
केही शंकास्पद विरामीको परिक्षण गर्ने क्रम चलिरहेको उनले बताए । यसअघि दुईजनामा हैँजाको संक्रमण पुष्टि भएको थियो । संक्रमण देखिएका मध्ये २ जनाको टेकु अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । बाँकी दुईजना भने घरमै उपचार गराइरहेका छन् ।
साधारण भाषामा हैजा भनेर बुझिने यो संक्रमण भिब्रियो कोलेरा नामक ब्याक्टेरियाका कारण हुने गर्दछ । समयमै उपचार हुन नसके यसले मानिसको ज्यानै समेत जान सक्ने चिकित्सक बताउँछन् ।
डाक्टर पुनका अनुसार कुनै व्यक्तिको पेटमा दुषित पानी तथा खानाको माध्यमबाट कोलेराको जिवाणु आन्द्रामा हुने इपिथेलिएल नामक कोषिकासम्म पुगेर त्यहाँ टाँसिएर बस्ने गर्दछन् । यस्ता ब्याक्टेरियाले त्यहाँ भएको सोडियम, क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट्स र पानीलाई कोषिका बाहिर आन्द्रामा फालिदिने भएकाले हैँजा भएमा चामलको चौलानी जस्तो तरल पदार्थ दिसाको रुपमा शरीरबाट निरन्तर बगिरहन्छ । जसका कारण शरीरलाई आवश्यक तत्त्वहरू बग्ने र शरीर कमजोर हुने उनले बताए । धेरै कमजोरीका कारण केही मानिस बेहोस नै हुनसक्ने पनि डा. पुन बताउँछन् ।
यस्तै, अधिकांश बिरामीमा पटकपटक बान्ता आउने, पेट वा खुट्टाको मांसपेशी बाउँडिने जस्ता समस्या देखिने गरेको उनको भनाई छ । अधिक तरल पदार्थ खेर जाने भएकाले बिरामीलाई धेरै तिर्खा र थकान लाग्ने तथा बेचैनी हुने उनले बताए । मुख्यतया हैजा सरसफाईमा ध्यान नदिएको कारण फैलने गर्दछ ।
यसपटक काठमाडौँमा हैँजा फैलनुमा दुषित पानि कारण हुनसक्ने डाक्टर पुनको दाबी छ । यसबारे थप अनुसन्धान हुनुपर्ने उनले बताए । हैजाबाट बच्न सरसफाईमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा डाक्टर पुनको जोड छ ।
सरसफाइमा ध्यान नदिएको खण्डमा उनीहरूमार्फत अन्य मानिसमा पनि हैजा फैलने भएकाले यसले थप गम्भिर अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने उनले बताए । सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान नदिए थप जोखीम निम्तन सक्ने पनि डाक्टर पुनले बताए । हैँजाले जुनसुकै उमेर समुहलाई पनि असर गर्न सक्ने भएपनि विशेष गरी यसले बालबालिका र बृद्धबृद्धाहरुलाई सताउने गरेको छ ।
हैँजाबाट बच्न पानी उमालेर मात्र खाने, सकेसम्म घर बाहिरको खानेकुरा नखाने, तरकारी फलफुल लगायत खानेकुरा राम्रोसँग पखालेर मात्र खाने, सडक पेटिमा राखेका खानेकुरा नखाने जस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने डा. पुनको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति : असार ९, २०७९ बिहीबार ३ : १२ बजे